Fanakorontanana : Mampitandrina ny foloalindahy -
AccueilRaharaham-pirenenaFanakorontanana : Mampitandrina ny foloalindahy
Ao anatin’ ny kihon-dalana amin’ny fanatanterahana ny fifidianana isika eto Madagasikara amin’ izao fanitsahana ny taona 2018 izao, ary nanamafy izany rahateo ny filoham-pirenena nandritra ny kabariny tetsy amin’ny lapam-panjakana Iavoloha ny zoma lasa teo. Ankoatra izay kabarin’ny filoha amin’ ny fanatanterahana ny fifidianana amin’ ity taona ity ihany koa, dia noresahiny ny mikasika ny asa fanakorontanana izay efa mahazatra ny sasany amin’ny fotoana lalovan’ny firenena tahaka izao. Manoloana izany indrindra no nanambaran’ ny minisitry ny Fiarovam-pirenena ny jeneraly Beni Xavier Rasolofonirina fa « tsy tokony ho tafalatsaka anatin’ ny krizy intsony ny firenentsika ». Mifono fampitandremana amin’ ireo izay mieritreritra fanakorontana mba ahazoany toerana tokoa izany tenin’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena izany, ary midika tsy fitsitsiana an’ireo izay efa mieritreritra sy mikononkonona. Mazava ny nambaran’ny minisitra tamin’ ireo foloalindahy fa « tsy ireo mpanao politika mihitsy no hizaka ny vokatry ny krizy fa isika sy ny fianakaviantsika » hoy izy. Satria tokoa ireo mpanao politika aorian’ny asa ratsy izay ataony dia mahita fifampiraharahana hatrany, ka mitohy ihany ny asan’izy ireo, ankilany ireo avy ao amin’ny foloalindahy dia mety hiharan’ny fanenjehana hatrany.
Ireo rehetra ireo dia nambaran’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena nandritra ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao tetsy amin’ ny cemes Soanirana ny sabotsy lasa teo. Maro tokoa ny lalana izay nolalovan’ny tafika nandritra ny fisian’ny krizy teto amin’ ny firenena, satria dia nanjaka ny fisaraham-bazana. Maro tamin’ireo eo anivon’ny foloalindahy ihany koa tamin’izany fotoana no nifanenjika, raha tsy hiresaka ohatra afa-tsy ny zava-nisy teny amin’ ny FIGN, BANI sy ny sisa izay ireo eo anivon’ny tafika ihany no voatery nifampitifitra. Noho izany dia tsapa nandritra ny kabarin’ny minisitry ny fiarovam-pirenena ny finiavana mba hampivondrona ny foloalindahy mba tsy ho voarebirebin’ny politika. Ho azy ireo tokoa mantsy dia efa mazava ny teny filamatra, fa dia ny fitiavan-tanindrazana izay antom-pisian’izy ireo. Ho an’ny minisitra dia iray ihany ny foloalindahy, ary tsy tokony hivoana amin’izany.